यस्तो छ, रुसले बनाएको को'रोनाको खोप , इजरायलले भन्यो हामी किन्न तयार छौ ! -
August 13, 2020 chothale
बीबीसी – रुसले को’रोनाभाइरस सङ्क्रमणविरूद्ध बनाएको खोपको सुरक्षालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका बेला उसले त्यस्ता चिन्ताहरूलाई “बिल्कुलै आधारहीन” भनेको छ।
रुसले मङ्गलवार देशको नियामक निकायले को’रोनाभाइरस सङ्क्रमणविरूद्ध रुसमै विकसित एउटा खोपलाई स्वीकृति प्रदान गरेको बताएको थियो। उक्त खोप दुई महिनाभन्दा कम समय मात्रै मानिसहरूमा परीक्षण गरिएको थियो। तर विज्ञहरूले रुसले यति चाँडै खोप बनाएकोप्रति सन्देह व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तो सन्देह व्यक्त गर्ने देशहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ।
उहाँले खोप चाँडै नै उपलब्ध हुने बताउनुभयो । उहाँले आउँदो दुई सातामा खोपको पहिलो खेप आउने र त्यो सुरुमा चिकित्सकहरूलाई दिइने जानकारी दिनुभयो । रुसी अधिकारीहरूले आगामी अक्टोबरदेखि ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूमा खोप लगाउन सुरु गरिने योजना रहेको बताउनुभएको छ ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मङ्गलवार खोप बनेको घोषणागर्नुभएको थियो। उहाँले उक्त खोप प्रभावकारी भएको र त्यसले प्रतिरोध क्षमतालाई बलियो बनाएको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नी एउटी छोरीलाई पनि उक्त खोप दिइएको बताउनुभयो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो खोपबारे समीक्षा गर्न आफूले रुसी अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको बताएको छ । मस्कोले उक्त खोपको नाम स्पुत्निक राखिने जनाएको छ । उक्त खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तेस्रो चरणको परीक्षणमा पुगेका भनी सूचिकृत गरेका ६ वटा खोपहरूको सूचिमा रहेको छैन । रुसी खोपबारे विशेषगरी अमेरिका र युरोपमा प्रश्न उठिरहेको छ।
जर्मनीका स्वास्थ्य मन्त्री येन्स स्पानले भनेका छन्, “लाखौँ मानिसहरूलाई खोप लगाउन सुरु गर्नु एउटा खतरनाक कुरा हो किनकी यदि त्यसमा केही खराबी भएमा मानिसहरूको खोपप्रतिको विश्वास नै उड्नेछ।” “हामीलाई जेजति जानकारी छ, त्यसका आधारमा के थाहा हुन्छ भने खोपको उचित परीक्षण भएको छैन‘ पहिले खोप बनाउनेको होइन, जरुरी त के छ भने एउटा सुरक्षित खोप विकास होस्।”
फ्रेन्च न्याशनल सेन्टर फर साइन्टिफिक रिसर्चकी अनुसन्धानकर्ता इसाबेल इम्बर्टले ला पेरिसियो अखबारलाई यति चाँडो उपचारको दाबी गर्नु निकै खतरनाक हुनसक्ने बताएकी छन् । अमेरिकाका वरिष्ठ भाइरस रोगका चिकित्सक डा. एन्टोनी फाउसीले रुसी दाबीप्रति आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
तर केही देशले रुसको घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले आफैँले उक्त खोपको परीक्षण गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “मलाई विश्वास छ तपाईँ (रुस)ले बनाएको खोप वास्तवमै मानवताका लागि असल कुरा हो। म त्यसको परीक्षण गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनेछु।”
दार्चुला । नेपाली सेनाले व्यासको घाँटीबगर इलाकामा कडा चट्टान रहेको भिरमा घोरेटो बाटोको ट्र्याक खुलाएको छ।...